Wasiirkii ugu horeeyey oo isu casilay Tartanka Gudoomiyaha Golaha Shacabka - BAARGAAL.NET
Barlamaanka DFS mooshin
✔ Admin on April 23, 2018 0 Comment
Wasiiru dowlaha Ganacsiga iyo Warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isku soo sharaxay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Wasiiru dowlaha Ganacsiga iyo Warshadaha, isagoo noqday ninkii u horeeyay ee xil isagoo haya iska casila, isna sharaxa
Mudanahaan ayaa isu casilay si uu u buuxiyo shuruudda Guddiga doorashada Gudoomiyaha Barlamaanka oo ay ka mid tahay in Wasiirada u tartamaya xilka Gudoomiyaha Golaha Shacabka iska casilaan xilkaas ka hor inta aysan tartamin.
Guddiga Qaban-qaabada doorahada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka.
Murashaxiinta araajidooda waxaa ay ku hagaajin karaan guddi-hoosaadka diwaan-gelinta murshaxiinta oo fadhigooda yahay xarunta Villa Hargeisa.
Murashaxa u tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka, kana tirsan golaha wasiirrada waa inuu guddiga qaban-qaabada u keenaa caddeyn ku xusan is-casilaadda/is-casilaadeeda marka uu is-diiwaangelinayo.
Kharashaadka is-diiwaangelinta murashaxiinta waxaa lagu shubayaa xisaabta furan Account No 127 ee golaha shacabka ku leeyahay bangiga dhexe ee dowladda.
Kharashka isdiiwaangalinta Musharixiinta waa 15,000 dollar Maraykanka.
Waqtiga Diiwaan-gelinta murashaxiinta Guddoomiyaha golaha shacabka 10.00 am-05.00 PM(Taariikh 23-24 April 2018 Isniin iyo Talaado).
Dhanka kale Musharixiinta ilaa hadda isasoo sharaxay ayaa gaaraya ilaa 12 Musharax.